1 Start faniem ir pieejams StartLogic
2 Quick StartLogic pārskats
Start faniem ir pieejams StartLogic
Eny, izaho tsy. Mbola tsy naheno momba ny orinasa fandraisam-bahiny aho mandra-pahitako ny fikarohana nataoko tamin’ity tranonkala ity tao amin’ny 2008. Nanao sonija taona iray nanaovana fifanekena tamin’i StartLogic aho tamin’ny 2008 mba hijery sy hamerina ny. Araka ny voalazan’ny reveko taloha, izay navoaka tamin’ny 2008. gada novembris, ny rakitra an-tserasera StartLogic dia tao anatin’ny 99,85 – 99,9% – tsy dia ratsy loatra ho an’ny host 5,95 USD / mo saingy azo antoka fa tsy. labākā tīmekļa mitinātāja nav. Ny fanohanan’ny mpanjifa dia somary Kely Miadana, saingy amin’ny ankapobeny dia manampy sy namana ny mpiasa.
Pikantsary amin’ny takelaka Startlogic. Ny orinasa fampiantranoana dia nametraka ny vidiny ho USD 2,75 / mo vao haingana.
Quick StartLogic pārskats
Mitombo ny vidiny aorian’ny fe-potoana voalohany – ny fe-potoana 24-volana dia manavao amin’ny $ 6,98 / mēn
Ny tsy fahampian’ny safidy hafa – ianao dia mila manova ny tranokalan’ny web ho fampiroboroboana ny VPS na cloud hostings
Iza nē Startlogic?
Startlogic dia mpamatsy serivisy fampiantranoana tranonkala izay mifantoka amin’ny fizarana fampiantranoana nizara ihany. Toan manana takelaka drafitra VPS fa noho ny antony Sasany, tsy mifandraika amin’ny tranon’izy ireo izany ary amin’ny alàlan’ny fikarohana Google no ahazoana azy. Nanangona lisitr’ireo tsara indrindra fampiantranoana tranonkala izay manolotra vokatra feno amin’ny fampiantranoana ahafahanao misafidy.
Amin’ny maha mpanome tolotra tranonkala mora vidy, ny Startlogic dia manolotra fahatokian-tena mety sy endri-javatra tsara sasany rotaļlieta ny mpanamboatra tranokala ary fahazoan-dàlana amin’ny dokambarotra maimaim-poana. Na izany aza, tsy misy lanana fampivoarana manan-danja izany, izany hoe raha maniry ianao dia mila manana izany mifindra jebkurš amin’ny tīmekļa mitinātājs.
Manomboka amin’ny $ 2,75 mēnesī, ny Startlogic dia azo antoka in iray amin’ireo alternators web hosting mora kokoa manodidina. Aza adino fa ny vidin’ny mitombo hatramin’ny USD 5,50 / mēn aorian’ny vanim-potoana fisoratana anarana.